Uphase ngamalengiso obefunda ngenuzi
UNKSZ Senamile Masango othweswe iziqu zeMasters kwiNuclear Physics eNyuvesi yaseWestern Cape ngeledlule Isithombe: Sithunyelwe
PHILI MJOLI | April 11, 2019
NOMA ungeyena ungqeqe kodwa uma uzimisela futhi unabantu abakwesekayo ngosizo oludingayo ezifundweni zakho uyaphumelela. Lokhu kushiwo nguNksz Senamile Masango odabuka KwaNongoma othweswe iziqu zeMasters kwiNuclear Physics eNyuvesi yaseWestern Cape ngoLwesihlanu.
Uthe bekungelula ukubuyela enyuvesi ngemuva kweminyaka eyevile kweyisikhombisa engasafundi.
Okunye okumdalele ingcindezi wukuthi abuyele enyuvesi esenenhliziyo ebuhlungu emuva kokushona kwendodakazi yakhe uSindisiwe ngo-2016 eneminyaka eyisikhombisa.
“Bekufanele ukuthi ngizihlolisise ngibheke ukuthi yiluphi usizo engiludingayo bese ngiya kubantu abafanele abazongisiza okungothisha nabanye ozakwethu. Ngizikhandle ngomsebenzi wesikole ukuze ngikwazi ukuphasa ngamalengiso. Ngijabule ngokuphumelela. Ngifuna ukumisa idolo nabanye abantu abasha okungenzeka ukuthi basesimeni esifanayo nesami. Bengingesona isitshudeni esiwungqeqe esiphasa ngo-A bodwa kodwa ngokuzikhandla nokuzimisele ngiphase umkhakha owaziwa ngokuthi unzima,” kusho uNksz Masango.
UNksz Masango uthe uyaqhubeka nokufunda usebhalisele iPhD.
Ngesikhathi efika enyuvesi ngo-2017 wathola ithuba eliyingqayizivele lokuthi abe ngowesifazane wokuqala omnyama oba sethimbeni lososayensi base-Afrika ebelihola ucwaningo ngenuzi i-European Organisation for the Nuclear Research, eSwitzerland, eyaziwa ngeCERN.
UNksz Masango uthe uyakholelwa kakhulu ekutheni imfundo esezingeni akumele itholwe ngabafundi abaphuma emindenini enemali ekwazi ukubakhokhela ezikoleni ezithile kodwa kumele bonke abafundi bayithole.
“Imfundo yisikhali esibaluleke kakhulu empilweni esikwazi ukuvula amasango abevalekile. Ngenxa yaleyo nkolelo yami ngikhethe ukuthi ngivule inhlangano ethuthukisa abantu besifazane kwisayensi, iWomen Scientist in Africa.”
Inhlangano izosabalalisa ama-science kit ezikoleni ezisemakhaya.
“Kunenhlangano engizoba yinxusa layo kodwa angikazukuyidalula ngoba angikaqedi ukusayina amaphepha. Ngizoba yinxusa layo, ingangikhokheli ngalowo msebenzi, inginike ama-science kit engizonikela ngawo ezikoleni zasemakhaya engikholwa wukuthi zidinga ukwesekwa kakhulu. Ngikusho lokhu ngoba ngiyibonile inselelo engibhekene nayo njengengane ekhulele emakhaya ngesikhathi ngisenyuvesi,” kusho uNksz Masango.